Fironana 8 amin'ny teknolojia lozisialy fivarotana | Martech Zone
Ny indostrian'ny varotra dia indostria goavana manatanteraka asa sy hetsika maro. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fironana ambony amin'ny rindrambaiko mpivarotra antsinjarany izahay. Aza miandry ela, andao hiroso amin'ny fironana isika.
Payment Options - Ny poketra nomerika sy ny vavahady fandoavam-bola samihafa dia manampy ny fahafaha-mandanjalanja amin'ny fandoavam-bola amin'ny Internet. Ireo mpivarotra dia mahazo fomba mora nefa azo antoka hamaliana ny fepetra takian'ny mpanjifa. Amin'ny fomba nentim-paharazana, vola ihany no avela ho toy ny fomba fandoavam-bola izay miteraka fahasarotana betsaka hitazomana, taty aoriana dia nanomboka ny fampiasana ny carte de deba sy ny carte de crédit izay mora nefa dingana iray ary handany fotoana be. Amin'ny andro maoderina dia niampita ny tetezana rehetra ary nanomboka nisafidy poketra nomerika ny olona hitahiry ny volany sy handoa vola. Izany dia manampy amin'ny fanafainganana ny fandoavam-bola ho an'ny mpanjifa ary miaraka amin'izay koa, ny mpivarotra dia mahazo tombony amin'ny sarany ambany amin'ny fifanakalozana.
Fanentanana ara-tsosialy - Ny mpanjifa koa dia miahiahy momba ny hetsika ara-tsosialy ary ny fanentanana ataon'ny orinasa. Ireo mpivarotra dia mijanona eo ambany fanerena mba hanao hetsika ara-tontolo iainana. Ny orinasam-pandraharahana dia manapa-kevitra ny hampihena ny fampiasana plastika, akora simika, hoditra, volombava, ary maro hafa mba hijanonana ho ara-tontolo iainana. Orinasa maro no misafidy fonosana voajanahary mba hanampiana ny natiora.
Analytics mialoha - Ny indostrian'ny varotra dia miasa miaraka amina tahirin-kevitra marobe ary nanjary voatarika. Ny angon-drakitra ho avy ho avy dia afaka manampy ny orinasa handray fanapahan-kevitra hendry kokoa sy hamakafaka faritra isan-karazany toy ny dinamika sy ny tatitra momba ny fividianana, ny fihetsiky ny mpanjifa, ny fironana ary ny famakafakana ny diany. Ny lamin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny asany dia afaka manampy amin'ny fampihenana ireo vokatra tsy mividy ary hampisondrotra ny varotra hafa amin'ny fijerena ny safidin'ny mpanjifa sy ny tombontsoany. Ny takatry ny fihenan'ny mpamatsy dia azo takarina ihany koa ary ny fividianana dia azo atao mifanaraka amin'izany mba hahazoana ny tolotra tsara indrindra.
Web Applications - Ny rindranasa miainga amin'ny tranokala fantatry ny toerana tsy mila fampidinana rindranasa finday ary vahaolana tsara satria manome tombontsoa maro samihafa toy ny fanavaozana mora, fanohanana ifotony mitovy amin'izany, rafitra mahay mandray olona, ​​mamaly be, tsy mila kalitao avo lenta Internet, ny tsirairay dia mora ampiasaina amin'ny motera fikarohana ary koa manohana ny fampandrenesana.
Fahaizana artifisialy - Ny hafatra Smart sy ny robots dia manampy ny orinasa amin'ny alàlan'ny fitehirizana ny angon-drakitra ara-bola rehetra ary ireo rafitra ireo dia afaka manome tolo-kevitra manokana, mitady vokatra marina, fitetezana mora, safidin'ny mpanjifa ary maro hafa.
Fanampiana amin'ny feo - Mampiasa mpanampy amin'ny feo ny mpanjifa amin'ny diany miantsena an-tserasera miaraka amin'i Amazon Alexa, google trano, Siri ary maro hafa ho mpiara-miasa anaty fiara sy mpanampy an-trano. Ireo mpivarotra am-barotra dia mifidy an'ity haitao ity sy amin'ny fikatsahana feo am-peo. Ireo mpamatsy feo dia mazàna azo itokisana kokoa satria haingana sy mora azo izy ireo manome fomba fiasa tsy misy tanana. Ity koa dia misy fetran'ny fahasarotana amin'ny famokarana valin'ny karoka, fitetezana sarotra noho ny lisitr'ireo valin'ny fikarohana sy ny maro hafa.
Fanarahana ny fanangonana - Ireo mpivarotra antsinjarany dia mila miara-mitantana hetsika maro hatrany ary mitaky fitaovan'ny fitantanana sy endri-javatra maro hafa hitantanana sy hanarahana ny fanarahana ny lisitra. Ny fiasa farany azo alaina ao amin'ny rindrambaiko antsinjarany dia misy rojo famatsiana mandeha ho azy, rafi-pitantanana, famaritana mialoha ny varotra, fitadiavana zavatra amin'ny stock, analytics amin'ny tena izy ary maro hafa. Ireo rehetra ireo dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny enta-mavesatry ny mpivarotra amin'ny alàlan'ny fitantanana hetsika maro an-tserasera.
Fikarohana an-tsary - Ny fikarohana ara-pahitana dia fotoana iray mampiroborobo ny asa aman-draharaha izay natomboka tato ho ato. Ny fikarohana an-tsary dia ahafahan'ny mpampiasa mahita mora foana ireo vokatra notadiaviny hatry ny ela. Mampanakaiky kokoa ny mpampiasa ny fividianana azy io satria mifanaraka tanteraka amin'ny zavatra takiny ny valin'ny fikarohana.
Ireo no vitsivitsy amin'ireo fironana ambony indrindra amin'ny lozisialy fivarotana sy ny fiovan'ny haitao sy ny fanavaozana, fironana bebe kokoa no ampiana tsy tapaka ao amin'ny indostria. Raha mila lisitr'ireo teknolojia lozisialy ambony naoty naoty ambony, zahao Techimply.
Tags: fampiharana miorina amin'ny browserfanarahana ny lisitrapifidiananavinavina Analyticsantsinjaranyantsinjarany airindrambaiko fivarotanafironana fivarotana lozisialyfironana teknolojia fivarotanafironana fivarotanafanentanana ara-tsosialymaso fikarohanafanampiana amin'ny feorindranasa tranonkala